Special Offer အသေးစိတျ
ပရိုမိုးရှငျး The Link 78 Mdy Hotel
Get Special Discount In The Link 78 Mandalay Boutique Hotel
အခုလိုမိုးရာသီလေးမှာ ချစ်ခင်ရတဲ့ သူလေးတွေနဲ့ Trip လေးသွားလိုက်ရရင်တော့ လုံးဝအမိုက်ပဲ… ခရီးအတူသွားခြင်းဟာ ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်မူတွေ၊ မေ့မရနိုင်တဲ့ အမှတ်တရတွေ ကျန်ခဲ့စေမှာပါ…
အဲဒါဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမူ အမွေနှစ်များစွာရှိတဲ့ မန္တလေးကို သွားမယ်ဆိုရင်ရော…?
မန္တလေးမြို့ကြီးဟာ ဂန္တ၀င်ဆန်သလို မန္တလေးတောင်ဟာလည်း ရှုမ၀နိုင်တဲ့ အလှတရား၊ မြတ်နိုးဖွယ် သဘာဝတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ဟာ မြန့်မာတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမူအမွေနှစ်နေရာ များပေါများလွန်းတာကြောင့်ရောက်ပီဆိုရင်တော့ သွားရောက်လည်ပတ် စရာနေရာတွေက တော်တော်လေးများပါတယ်။
အခုအချိန်ကမိုးဦးကျအချိန်အခါ လေးဖြစ်တာမို့ မန္တလေးက ပုံမှန်အပူရှိန်လေး အနည်းငယ်မြင့်တော့ ပူအိုက်မူဒဏ်ကိုမခံချင်သူများအတွက်ကတော့အချိန်အခါကောင်းလေပါနော်။ ဒ့ါအပြင် စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ အေးတဲ့ရာသီလေးမို့လို့ နွေးထွေးမှုပေးမဲ့ ကိုယ်ရဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ရဲ မိသားစု တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ တိုက်တွန်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ကိုဆောင်နေတဲ့ ယဉ်ကျေးမူအမွေနှစ်များစွာနဲ့ ပြည့်နက်နေသော ရွှေမန်းမြို့ကို အလည်လာသွားပီး အေးဆေးအပန်းဖြေနားယူဖို့အတွက်ကတော့ Hotel ရွေးချယ်မူကလည်း မှန်ကန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ B&F Weekly Promotions ရဲ့ Mobile App နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ Promotions ကူပွန်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် လာရောက်တည်းခိုမယ်ဆိုရင် Discount တွေရအုန်းမှာဆိုတော့ ဘာများတွေဝေနေအုန်းမှာလဲ?
The Link 78 Mandalay Boutique Hotel မှာ Discount ပေးနေတဲ့ Room ကတော့
Superior Room (Original Price 100,000 MMK – 75,000 MMK) နဲ့တည်းခိုခွင့်ရရှိမှာပါ..
The Link 78 Mandalay Boutique Hotel Address
No.627, Coner of 78th Street & 31st Street, Kitsana mahi Ward, Chan Aye Thar San Township, Mandalay.
Phone Number- 09 4444 38366
မှတ်ချက် - The Link 78 Mandalay Boutique Hotel မှာသွားရောက်တည်းခိုဖို့ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် 01 8603204, 01 8603205, 01 8603206, 01 8603207 ကိုဆက်သွယ်ပြီး Booking တင်ပေးပြီးမှ Promotion ရယူခံစားနိုင်ပါတယ်…
The Link Hotel မှာ Promotions လေးတွေကို ရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ယခုစာမျက်နှာအပေါ်က Use Now ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီး ကျလာတဲ့ Success စာမျက်နှာကို Walk- In ဝင်ပီးပြပေးရုံနဲ့ Promotions ကိုခံစားခွင့်ရရှိမှာပါ။
Mobile App အသုံးပြုပုံနဲ့ပက်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခက်ခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက B&F Weekly Promotions Head Office 09-969910128, 09-969910115 တို့ကို ရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
The Link 78 Mdy Hotel ဆိုငျ
ဖုနျးနံပါတျ : 018603204,018603205,018603206,018603327